mardi, 10 juillet 2018 23:30
Vontovorona: Mpianatra 5 voasambotra, 2 naratra
Niafara tamin'ny fisamborana ny andro faharoan'ny fitokonan'ny mpianatry ny polyteknika Vontovorona androany. Nisy mpianatra 5 voasambotra taorian'ny tora-bato sy lakrimozena nifamalian'izy ireo tamin'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny Emmoreg. Navotsotra ny tolakandro teo ihany moa izy ireo. Nisy ihany koa olona roa naratra nandritra ny sakoroka sy fisamborana, ka mpianatra ny iray tamin'ireo.
OTIV Boeny: Hidina an-dalambe ireo mpikambana very vola
Ny zoma 13 jolay izao, hitokona manoloana ny Lapan'ny Tanàna sy ny Prefektiora, hilanja sorabeventy, hampaneno vilany sy sarom-bilany ireo mpikambana tao amin'ny OTIV Boeny tompon'ny vola nanjavona tsy hita hoe lasa aiza. Izay no tapak'izy ireo nandritra ny fivoriana notontosaina teny amin'ny birao fiasan'ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa ny maraina teo.
Ampy izay ny roa taona niandrasana sy nandrirariran'ny fanjakana amin'ny famahana ny olan'izy ireo raha ny nambaran'ny solontena nitondra teny. Na Ariary aza tsy nisy tafaverina ny volan'ireo mpikambana nametraka vola tao amin'ity orinasa madinika fitehirizana sy findramam-bola ity.
mardi, 10 juillet 2018 13:31
Pasteur Mailhol: Nametraka fitoriana teny amin’ny HCC
Tonga teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) Ambohidahy ny Filoha mpanorina ny antoko GFFM androany talata 10 jolay 2018 maraina teo, nametraka fitoriana mitaky ny hamerenana ireo nosy malagasy ambara ho “îles Éparses” amin’i Madagasikara mba hiadanan'ny vahoaka Malagasy sy ny taranaka faramadimby.
Kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, nilaza i Pasteur Mailhol fa tsy ijerena anarana antoko na fiavina ny ady atao amin’ny fahantrana.
mardi, 10 juillet 2018 12:42
Vontovorona: Mitohy ny famoretana, notapahina ny jiro
Ankoatran'ny grenady lakirimozenina mihatra amin'ireto mpianatra mitokona, dia tapaka ihany koa ny jiro amin'izao.
Ny mpianatra anefa dia mahandro sakafo amin'ny résistance, ka dia maro ireo tsy mahamasaka sakafo amin'izao, mbola tsy fantatra ny fiafaran'ny sakoroka, fa mienjana ny famoretana atao an'ireto mpianatry ny politekinika, mbola mitohy hatreto ny toraka grenady lakirimozenina.
mardi, 10 juillet 2018 12:37
Vontovorona: Mirefotra ny grenady lakirimozenina
Ity fitondrana nahazo seza miara-mitantana ho an'ny fanovana ity moa dia tsy mahay mifampiresaka raha tsy amin-kery.
Mirefotra indray eo amin'ireo mpianatra politekinika ny grenady lakirimozeina amam-poliny maro ho setrin'ny fitakian'izy ireo ny ahafahan'ireo vita fianarana hanao mémoire, raha tanora vitsy kely ihany no afaka hanao izany noho ny famerana ho 4 isaky ny mpampianatra ihany ny encadrement.
mardi, 10 juillet 2018 10:09
Mitovy ny rehetra eo ambanin'ny lalàna, amboarina moderina ny Biraom-pokontany (Village administratif de base)
Amin'ny tetikasa "Vitatsika io" dia :
1- Mitovy ny rehetra eo ambanin'ny Lalàna :
- Mitovy manoloana ny lalàna sy ny Fitsarana ny rehetra, na mpitondra na ny entina, fitsarana mahaleo tena, tokana no mitsara ny rehetra;
- Foanana ny immunité, mitovy ny rehetra, izay mandika lalàna dia voasazy, tsy misy fiarovana manokana;
- Miala ny pin pan sy ny escorte prioritaire ho an'ny mpitondra rehetra afa tsy amin'ny cérémonie officielle;
- Foanana ny ticket carburant ho an'ny mpitondra, garde corps, trano, mpiasa an-trano... Samy miantoka ny fiainany amin'ny karamany. Resaka asa ihany no ampiasana ny fiaram-panjakana plaque rouge sy ny fitaovam-panjakana.
mardi, 10 juillet 2018 09:17
Vontovorona: Mitohy ny grevin'ny mpianatra, mihatrana ny Emmoreg
Nanomboka omaly alatsinaina 09 jolay no nitokona ireo mpianatry ny Politekinika Vontovorona, mitaky ny fahafahan'ireo mpianatra hanao mémoire rehefa vita ny fianarana.
Nisy ny sakoroka omaly hariva, noravan'ny Emmoreg tamin'ny grenady lakrimozenina ireto mpianatra nivoaka an'arabe ireto, nisy ny naratra sy sempotra tamin'izany.
Izao maraina izao anefa dia nitohy ny grevin'ireto mpianatra. Manisy barazy izy ireo eo amin'ny vavahadin'ny sekoly sy eo akaikin'ny labatoara.
Efa mihatrana koa anefa ireo Emmoreg maro. Mbola tsy misy hatreto ny sakoroka fa ny kesika misy grenady no efa avoaka ny fiara 4x4.